HARGEYSA, Somaliland - Mudooyinkii dambe waxaa soo ifbaxayay warar sheegayay in gabi ahaanba la xiray Xafiiska Somaliland ku lahayd magaalada Addis Ababa, kadib markii uu Abiy Axmed talada dalkaasi la wareegay bishii April ee sanadkan.
"Waxba kama jiraan in la xiray Safaarada Somaliland ee Addis Ababa. Sidii hore ayay u shaqaynaysaa. Waxaana rajeynaynaa inuu sii shaqeeyo," ayuu Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland u sheegay warbaahinta.
Dr Sacad ayaa hadalkiisa intaas ku daray in Isbedaladda ka dhacaya wadanka Itoobiya ee uu hormuud ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed aysan saameyn ku yeelan doonin xiriirka Somaliland kala dhaxeeya xukuumadda Addis Ababa.
"Cilaaqaadka nagala dhaxeeya Itoobiya, waa mid ku saleysan isku daneysi, waxaana rajeynaynaa inuusan wax saameyn ah ku yeelan doonin isbedalada Abiy Axmed, uuna sii jiri doono xiriirkeena," ayuu Dr Sacad daray hadalkiisa.
Wasiirka oo ka hadlay Shirka ka socda maalintii labaada magaalada Brussels ayaa shaaciyay in Somaliland aysan waxba ka khuseynin kulankaasi, maadaama loo qabtay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka.
Mar wax laga waydiiyay arinta joojinta qoondadii Somaliland ee deeqaha beesha caalamka, ayuu ku jawaabey: "Soomaaliya markii horeba iyadu ma bixinaynin lacagta, ee beesha caalamka ayaa bixiya, iyaga ayaana og sidii ay ku bixin lahaayeen."
Wuxuu carabka ku adkeeyay in Somaliland aysan ahayn maamullada xubaha ka ah dowladda Federaalka, sidaasi darteedna ay ka donayaan caalamka inuu si gaar ah ula macaamilo, oo u siiyo qeybtooda deeqaha dhaqaale ee ay uga tala-galeen.
Hadalka Dr Sacad ayaa jawaab u ah qorshe cusub oo ay wadaan dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada, oo ay uga dalbadeen deeqbixiyaasha inay joojiyaan lacag deeq ah oo Somaliland la siin jiray tan iyo 2013, taasoo waqtieedu dhacay 2016.
Somaliland 21.02.2019. 16:38